ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ - မလေးရှား ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု
မလေးရှား ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ကာကွယ်ရေး အက်ဥပဒေ ၂၀၁၀ (“ ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု အသိပေးချက်” ) နှင့် ဥပဒေအောက်တွင် လက်ခံနိုင်သော အတိုင်းအတာအထိ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့ ထုတ်ဖော်ခြင်းနှင့် စီမံလုပ်ဆောင်ခြင်းအား သက်ရောက်လိမ့်မည်ဖြစ်သော မူများနှင့်အညီ ဤအသိပေးချက်ကို ထုတ်ပြန်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင်၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက် လုံခြုံရေးကို ထိန်းသိမ်းရန်နှင့် ခွင့်မပြုဘဲ ဝင်ရောက် ရယူမှုကို ကာကွယ်ရန် တင်းကျပ်သော လုံခြုံရေး စံနှုန်းများကို ကျင့်သုံးပါသည်။
ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ဆိုသည် မလေးရှား ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ကာကွယ်ရေး အက်ဥပဒေ ၂၀၁၀ ကို အခြေခံမှတ်ယူနိုင်အဓိပ္ပါယ်တစ်ရပ် ရှိပါသည်။
မည်သည့်အချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့ ရယူပါသလဲ?
ပေးထားသည့် အွန်လိုင်းပုံစံ၊ အီးမေးလ်၊ သတင်းလွှာ သို့မဟုတ် စစ်တမ်းများမှတစ်ဆင့် သင်မှ ကျွန်ုပ်တို့အား ပေးအပ်သော အချက်အလက်များ။
အောက်ပါတို့ပါဝင်သော်လည်း ၎င်းတည်းသာ ဖြစ်သည်ဟု ကန့်သတ်မထားသည့် ကျွန်ုပ်တို့မှ အလိုအလျောက် ရယူသော အချက်အလက်များ –
ကွက်ကီးများ သို့မဟုတ် ခြေရာခံနည်းပညာများ အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝဘ်ဆိုက်မှတစ်ဆင့် သင့်အနေနှင့် ကျွန်ုပ်တို့နှင့် အပြန်အလှန် ဆက်သွယ်တုံ့ပြန်သည့်အခါ သို့မဟုတ်
ကျွန်ုပ်တို့ သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့၏ ပါတနာများ သို့မဟုတ် နှစ်ဦးလုံးမှ စီစဉ်သော ပွဲများ၊ ဟောပြောပွဲများ၊ အစီအစဉ်များနှင့် အွန်လိုင်း နှီနှောဖလှယ်ပွဲများအတွင်း ကျွန်ုပ်တို့နှင့် အပြန်အလှန် တုံ့ပြန်သည့်အခါ သို့မဟုတ်
ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ပတ်သက်၍ လူမှုကွန်ရက်မှတစ်ဆင့် မိတ်ဆွေ/အဆက်အသွယ်တစ်ခုမှ မှတ်ချက်တစ်ခု သို့မဟုတ် အခြား အကြောင်းအရာကို သင့်အနေဖြင့် ရေးသောအခါ သို့မဟုတ် စာတစ်ပုဒ်ကို မျှဝေသော အခါ သို့မဟုတ်
သင်၏ သို့မဟုတ် အခြားတစ်ဦးတစ်ယောက်စီ၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးအပ်ခြင်းအားဖြင့် သင်နှင့် ဤတစ်ဦးတစ်ယောက်သည် ဤကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု အသိပေးချက်နှင့်အညီ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ရယူခြင်း၊ အသုံးပြုခြင်းနှင့် ထုတ်ဖော်ခြင်းကို ခွင့်ပြုကြောင်း သင့်အနေဖြင့် အတည်ပြုပါသည်။ သင့်အနေဖြင့် ဤသို့ သင်၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ အသုံးပြုခြင်းနှင့် ထုတ်ဖော်ခြင်းကို ခွင့်မပြုလိုပါက ကျွန်ုပ်တို့အား သင်၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို မပေးအပ်ပါနှင့်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ဘာကြောင့် ရယူသလဲ?
ကျွန်ုပ်တို့သည် အောက်ပါရည်ရွယ်ချက်များအတွက် သင်၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ရယူစီမံပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့ ဆိုက်များ၏ ဆောက်ရွက်ချက်နှင့် အသုံးပြုသူ အတွေ့အကြုံကို တိုးမြှင့်စေခြင်း
ကျွန်ုပ်တို့ လုပ်ငန်း လည်ပတ်ခြင်း၊ အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့် တိုးတက်စေခြင်း
သုတေသနနှင့် စိတ်ဖြာလေ့လာမှုများ ဆောင်ရွက်ခြင်း
သင့်တစ်ဦးတည်းအတွက် အကြောင်းအရာများဖြင့် သင့်အား ပေးအပ်ခြင်း
သင်၏ စုံစမ်းမေးမြန်းမှုများကို စီမံတုံ့ပြန်ရန်
သင့်အား ပေးအပ်သော အချက်အလက်များကို အတည်ပြုရန် သို့မဟုတ် ပြင်ဆင်ရန်
သင့်အား ကျွန်ုပ်တို့ စီစဉ်သော ပွဲများ၊ ဟောပြောပွဲများ၊​ အစီအစဉ်များနှင့် အွန်လိုင်း နှီးနှောဖလှယ်ပွဲများကို ဖိတ်ကြားရန်
စျေးကွက်မြှင့်တင်ခြင်းနှင့် အဖွဲ့တွင်း စီမံအုပ်ချုပ်ရေး ရည်ရွယ်ချက်အတွက်
အစိုးရ သို့မဟုတ် အာဏာပိုင်များ သို့မဟုတ် တရားရုံး တစ်ခုခု၏ လိုအပ်ချက်များအပါအဝင် ဥပဒေများနှင့် နည်းဥပဒေများ လိုက်နာရန် ရည်ရွယ်ချက်အတွက်
အခြား တရားဝင် စီးပွားရေး လုပ်ငန်း ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်
ကျွန်ုပ်တို့သည် သင်၏ ကိုယ်ရေး အချက်အလက်များကို လျှို့ဝှက် သိမ်းဆည်းလိမ့်မည်ဖြစ်ပြီး သင်၏ ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲ အခြားမည်သည့် မိတ်ဖက် အဖွဲ့အစည်းများကိုမှ သင်၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ထုတ်ဖော်ပေးလိမ့်မည် မဟုတ်ပါ။
သင်သည် ဤနေရာတွင် သင်၏ ကိုယ်ရေး အချက်အလက်များကို အောက်ပါ အဖွဲ့အစည်းများသို့ ထုတ်ဖော်ခွင့်ကို ကျွန်ုပ်တို့အား ပေးအပ်ပါသည်။​ထိုအဖွဲ့အစည်းများတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဥပဒေနှင့်အညီ ထိုသို့ ပြုလုပ်ရန် လိုအပ်စေသော သို့မဟုတ် မဖြစ်မနေ လုပ်စေသော အစိုးရ အေဂျင်စီများ၊ ပြဋ္ဌာန်းဥပဒေအာဏာပိုင်များနှင့်/သို့မဟုတ် လုပ်ငန်း ထိန်းချုပ်စည်းကြပ်သူများ အပါအဝင်ဖြစ်သော်လည်း ၎င်းတို့သာဖြစ်သည်ဟူ၍ ကန့်သတ်မထားပါ။
ရယူခွင့်နှင့် ပြင်ဆင်ခြင်းဆိုင်ရာ သင့်အခွင့်အရေး
သင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား ဆက်သွယ်ခြင်းအားဖြင့် ပေးထားသည့် သင်၏ ခွင့်ပြုချက်ကို (အပြည့်အဝ သို့မဟုတ် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း) ရုပ်သိမ်းရန်၊ သင်၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ကို သင့်အနေဖြင့် ရယူနိုင်သည်၊ ပြင်ဆင်ရန် တောင်းခံနိုင်သည် သို့မဟုတ် ထပ်မံ ဖြည့်စွက်နိုင်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် အချက်အလက်များကို ဘယ်လောက်ကြာကြာ ထိန်းသိမ်းထားမလဲ?
ကျွန်ုပ်တို့သည် သင်၏ ကိုယ်ရေး အချက်အလက်များ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ရန် ရည်ရွက်ချက်များအတွက် လိုအပ်သလောက်ကြာကြာ ထိန်းသိမ်းထားပါမည်။ ထိုကာလသည် အချက်အလက်၏ သဘောသဘာဝနှင့် ကျွန်ုပ်တို့အပေါ် သင်၏ တုံ့ပြန်မှုများအပေါ်တွင် မူတည်၍ ပြောင်းလဲပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို စီမံရန် ရည်ရွယ်ချက်များကို ပြီးဆုံးသောအခါ ကျွန်ုပ်တို့သည် သက်ဆိုင်ရာ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ဖျက်စီးခြင်းကိုသော်လည်းကောင်း အပြီးတိုင် ပယ်ဖျက်ခြင်းကိုသော်လည်းကောင်း မည်သူမှ တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းစီကို သိရှိနိုင်မည် မဟုတ်ကြောင်း သေချာသည့် အနေအထားဖြင့် အမည်မသိပြုခြင်းကိုသော်လည်းကောင်း ပြုလုပ်ပါလိမ့်မည်။
ဤကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု အသိပေးချက်ကို ပြောင်းလဲခြင်းများ
ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤကိုယ်ရေး လုံခြုံမှု အသိပေးချက်များကို သင့်လျော်သည့် ဥပဒေများ၊​ နည်းဥပဒေများနှင့် အညီ မည်သည့် လိုအပ်သည့် ပြောင်းလဲမှုများကိုမဆို ထင်ဟပ်ရန် အချိန်နှင့်အမျှ သုံးသပ်ပြီး မွမ်းမံပြင်ဆင်နိုင်ပါသည်။
ဤကိုယ်ရေး လုံခြုံမှု အသိပေးချက်တွင် အပြောင်းအလဲများကို သင့်အား အသိပေးရန် ယေဘုယျအားဖြင့် လက်တွေ့မကျသောကြောင့် နောက်ဆုံးဗားရှင်းကို ဤဝဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင် အမြဲတမ်း တင်ပါထားပါမည် သို့မဟုတ် ရရှိအောင် လုပ်ဆောင်ထားပါမည်။ သင်သည် နောက်ဆုံးဗားရှင်းကို သတိပြုမိသည်မှာ သေချာစေရန် သင်၏ ထပ်ဆောင်းကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို မတင်သွင်းခင်တွင် ဤကိုယ်ရေး လုံခြုံမှု အသိပေးချက်ကို စစ်ဆေးကြည့်ရန်မှာ သင်၏ တာဝန်သာ ဖြစ်ပါသည်။ ဤဝဘ်ဆိုက်ကို ဆက်လက် ဝင်ရောက်ခြင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ဆက်ဆံခြင်းနှင့်/သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အား ဝန်ဆောင်မှုများပေးနေစဉ်အတွင်း ကျွန်ုပ်တို့အား ညွှန်ကြားပေးခြင်းဖြင့် သင်သည် ဤကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု အသိပေးချက် မွမ်းမံပြင်ဆင်မှုများကို ခွင့်ပြုချက်ပေးပြီးဖြစ်သည်ဟု မှတ်ယူပါသည်။
8. အီးမေးလ် ဆက်သွယ်မှု
ကျွန်ုပ်တို့ ကိုယ်တိုင်နှင့် ဖောက်သည်များ သို့မဟုတ် အခြားပြင်ပ အဖွဲ့များအကြားတွင် တရားဝင် ဆက်သွယ်မှုအားလုံးကို ဒိုမိန်း “@mhtc.org.my”မှ အီမေးလ်အကောင့်များကို အသုံးပြု၍ ပေးပို့ခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ပုံမှန် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း ဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့တွင် မလိုလားအပ်သည့် အီးမေးလ်များ မပေးပို့သည့် တင်းကြပ်သော မူဝါဒ တစ်ရပ် ရှိပြီး ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကို တောင်းခံသည့် အီမေးလ်များကို ပေးပို့ခြင်း မရှိပါ။ ကျွန်ုပ်တို့ထံမှား ပေးပို့ဟန်ဆောင်သည့် ထို့သို့သော မည်သည့် အီးမေးလ်မဆိုသည် ကျွန်ုပ်တို့ကို သိရှိသော လူတစ်ဦးတစ်ယောက် သို့မဟုတ် လူများမှ တစ်ဦးတစ်ယောက်မှန်း သိစေနိုင်သည့် အချက်အလက်များကို ခိုးယူသည့် အမှုတစ်ရပ်ဖြစ်ပါသည်။
သင်သည် အခြားမည်သည့်ဒိုမိန်းမှမဆို အီးမေးလ်တစ်စောင် လက်ခံရရှိခဲ့ပါက ထိုဆက်သွယ်ခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ တရားဝင် လုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သက်မှုမရှိဘဲ ကျွန်ုပ်တို့ထံမှ ပေးပို့ခြင်း သို့မဟုတ် အတည်ပြုထားခြင်း မဟုတ်ကြောင်း နားလည်ပြီးဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့၏ မည်သည့်မိတ်ဖက်များနှင့် မည်သည့် ဆက်စပ်တောင်းခံမှုများကိုမဆို ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းမရှိဘဲ ကျွန်ုပ်တို့သည် ထိုဆက်သွယ်ခြင်းများတွင် ပါဝင်သော အကြောင်းအရာအတွက် သို့မဟုတ် ထိုဆက်သွယ်မှုများအပေါ်အခြေခံ၍ မည်သည့်ဆောင်ရွက်ချက်များမဆို၏ အကျိုးဆက်များအတွက် တာဝန်ရှိလိမ့်မည် မဟုတ်ပါ သို့မဟုတ်
9. ကျွန်ုပ်သည် အခြားဆိုက်များသို့ သွားသည့်အခါ ဘာဖြစ်မလဲ?
ဤဝဘ်ဆိုက်တွင် အခြားဝဘ်ဆိုက်များကို သွားသည့် လင့်များ ပါဝင်ပါသည်။ ဤကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဆိုက်တွင်သာလျှင် သက်ရောက်ပြီး ဤဝဘ်ဆိုက်မှ ချိတ်ဆက်ဖော်ပြထားသော အခြားဆိုက်များတွင် သီးခြား ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ ရှိနိုင်ကြောင်း သင့်အနေဖြင့် သတိပြုမိသင့်ပါသည်။ သင်သည် ဆိုက်တစ်ခုချင်းစီ၏ ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု ထုတ်ပြန်ချက်များကို ဖတ်ရှုနားလည်ထားရန် ကျွန်ုပ်တို့ အထူး အကြံပေးလိုပါသည်။
10. မေးခွန်းများနှင့် ဆက်သွယ်ရန် အချက်အလက်
သင့်တွင် ဤကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု အသိပေးချက်နှင့် ပတ်သက်၍ မေးခွန်းတစ်စုံတစ်ရာ ရှိပါက callcentre@mhtc.org.my ကို အီးမေးလ်ပေးပို့ ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။